၂၀၁၈ FIPA Green Car of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ Nissan Leaf! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ FIPA Green Car of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ Nissan Leaf!
Electric Vehicle (EV) တွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Nissan Leaf ဟာဆိုရင် Detroit မှာကျင်းပတဲ့ 2018 North American International Auto Show မှာ “2018 FIPA Green Car of the Year” ဆိုတဲ့ ဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ The Inter-American Federation of Automobile Journalists (FIPA) ကနေပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Nissan Leaf ဟာ “2018 FIPA Green Car of the Year” ဆု အတွက် Top 10 အထိပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီး ဆုရရှိခဲ့တာပါ။ ဒီရလဒ်ကတော့ Nissan ဟာ EV တွေထဲမှာဉီးဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်သလိုပါပဲ။
ဒီဆုကို Nissan Latin America ရဲ့ Chairman ဖြစ်သူ Luis Valls က FIFA ထံမှလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nissan Leaf ဟာ အရင် version နဲ့တုန်းကလည်း “2016 4-Wheel Drive Electric Car of the Year” ဆု ကို ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့တော့ Nissan Leaf ဟာ Nissan ကို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေဂုဏ်ဆောင်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
“This award isaclear example of Nissan’s global leadership in electric vehicles and autonomous driving technology under the vision of Nissan Intelligent Mobility, where the brand aims to improve people’s lives throughatransformation in how vehicles are driven, powered and integrated into society,” said Luis Valls.
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Luis Valls ရဲ့ Nissan Intelligent Mobility အတွက်ပြောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan မှာရှိတဲ့ EV model နှစ်ခုထဲကတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Nissan Leaf ရဲ့ရာဇဝင်အချို့ကိုပြန်ကြည့်ပါ့မယ်။
Nissan Leaf model က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကနေ အခုအချိန်အထိ ဆိုရင် Nissan Leaf ကိုရောင်းချနိုင်တဲ့ အရေအတွက်က ၃ သိန်းအထိ ရှိနေပါပြီ။ Nissan Leaf ရဲ့ generation အသစ် (FIPA ကဆုရခဲ့တဲ့ Nissan Leaf) ကိုတော့ ၂၀၁၇ အကုန်နားလောက်မှာပဲ Tokyo မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Generation အသစ် Nissan Leaf မှာတော့ ProPILOT autonomous driving technology ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ProPILOT autonomous driving tech ပါဝင်တာကြောင့် ကားပေါ်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုပိုမိုလုံခြုံစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကားရဲ့အပြင်ပိုင်းကလည်း ပြောင်လက်နေသလို၊ အတွင်းပိုင်းကလည်းသန့်ရှင်းပြီး စီးရတာအဆင်ပြေတာကြောင့် ကား ကောင်းလေးတစ်စီးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လုံခြုံမှုပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာတွေလည်းပါဝင်သေးတာမို့ စီးရတန်လောက်မှာပါ။ Nissan အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုနည်းပညာတွေ ထပ်မံဖန်တီးမိတ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
The 2018 @Nissan #LEAF at our HQ for interoperability testing. #NissanLEAF #EV #MakeTheSwitch pic.twitter.com/gqj7w9nsoa
— ChargePoint (@ChargePointnet) January 16, 2018